Pituitary Luteinizing ngama-hormone uma Injection (LH) - China Ningbo Okwesibili-hormone okuthiwa i
Pituitarii Lutropinum Pro Injectione (LH) [Incazelo] Lo mkhiqizo omhlophe noma ukuvala-white amabhlogo nqabela-omisiwe noma powder. [Umsebenzi nokusetshenziswa] i-hormone izidakamizwa. Bebambisene pituitary i-hormone follicle-inkanuko, kungase ukukhuthaza nokuvuthwa sokugcina follicle, ntombazane ukukhiqizwa kwamaqanda of follicle ovuthiwe enze isizukulwane Corpus luteum. It is ikakhulukazi esetshenziswa: 1. Nyusa follicle ukuze sivuthwe futhi ovulate; 2. Ukukhuthaza isizukulwane obusebenzayo Corpus leteum; 3. Cure nge-ovulation ...
Lo mkhiqizo omhlophe noma ukuvala-white amabhlogo nqabela-omisiwe noma powder.
I-hormone izidakamizwa. Bebambisene pituitary i-hormone follicle-inkanuko, kungase ukukhuthaza nokuvuthwa sokugcina follicle, ntombazane ukukhiqizwa kwamaqanda of follicle ovuthiwe enze isizukulwane Corpus luteum.
It is ikakhulukazi esetshenziswa: 1. Nyusa follicle ukuze sivuthwe futhi ovulate;
2. Ukukhuthaza isizukulwane obusebenzayo Corpus leteum;
3. Cure nge-ovulation ukwehluleka (ukuvuthwa abampofu follicle; nge-ovulation imisiwe);
4. Cure ukufa ekuseni noma isisu zemibungu kubangelwa hypoplasia ka Corpus luteum;
5. Ikhambi oestrum sifushane kakhulu futhi uphinda umfuyi kwezilwane owesifazane;
6. Cure follicle simila;
7. Ikhambi besilisa izilwane nge ongaphakeme ubulili drive, ongaphakeme isidoda ivolumu kanye nesidoda kancane.
I. Kwabe sekuqala pplication ka C attle Lokuzaliswa
1. Ukwelashwa umile umsebenzi wesibeletho: ujove esicutshini ka 200IU ka FSH plus 100IU ka LH; the nokushintsha kokudla nokufakwa kufanele liphindwe kanye uma kuba ayizwakali.
2. Induction nge-ovulation: ujove esicutshini ka 200-300IU ka LH ngesikhathi kokuzalela noma amahora ambalwa ngaphambi kokuzalela ongakwazi ukukukhuthaza ukukhiqizwa kwamaqanda futhi sithuthukise ekhulelwayo eliphakeme.
3. Ukuvumelanisa nge-ovulation: ujove esicutshini ka 200IU ka LH ngesikhathi estrus izinkomo zesifazane emuva kokuthola ukwelashelwa nge estrus ukuvumelanisa ungaqhubeka ukukhuthaza ukuvumelanisa nge-ovulation kanye ngcono ekhulelwayo eliphakeme ngemva estrus ukuvumelanisa.
4. nge-ovulation Super: ujove esicutshini ka 200IU ka LH angu-72 emva super ukwelashwa nge-ovulation ongakwazi ukukukhuthaza nokuvuthwa kanye nge-ovulation of follicle futhi kuthuthukise umphumela super ukukhiqizwa kwamaqanda.
5. Ukuvimbela izisu: ujove esicutshini ka 200IU ka LH izinsuku ezimbalwa emva insemination yokufakelwa; ekuphathweni okuqhubekayo izinsuku 2-3 elandelanayo.
1. Thuthukisa super-ovulation nomthelela izimvukazi: ujove esicutshini ka 100-200IU ka LH angu-72 emva super ukwelashwa nge-ovulation ongakwazi ukukukhuthaza nokuvuthwa kanye nge-ovulation of follicle futhi wenze nge-ovulation ezivumelanisiwe.
2. esicutshini umjovo we 50-100IU ka LH ngoba izimvukazi ngesikhathi noma ngemuva ngokumitha kwemihlambi ngaphakamisa izinsuku 2-3 elandelanayo elaphe ukufa ekuseni noma isisu komkhuba imibungu kubangelwa hypoplasia ka Corpus luteum.
3. Cure besilisa izilwane nge ongaphakeme ubulili drive, ompofu izinga isidoda, cryptorchidism nokuvusa induku, njll
Lo mkhiqizo ngokuvamile akawufaneli ku isixazululo yokugcina uma ukungaqaliswa.
Umthamo liyakushunyayelwa kabili ukuze kwelashwe simila wesibeletho.
[Isikhathi sokuqinisekiswa] iminyaka engu-2
[Ukuhoxiswa Period] Cha hlinzeka
Previous: Pituitary follicle Ugqozi ngama-hormone uma Injection (FSH)
Olandelayo: Posterior pituitary Injection